hooyo ka codsatay musharaxa jamhuuriga Donald trump inu joojiyo isticmaalka magaca wiilkeeda .. - iftineducation.com
hooyo ka codsatay musharaxa jamhuuriga Donald trump inu joojiyo isticmaalka magaca wiilkeeda ..
iftineducation.com – Hooyada Ambassadorkii mareekanka ee dalka Libya J. Christopher Stevens, kaasoo ku dhintay intii lagu guda jiray weerarki Benghazi, sanadii 2012 aya warqad qoraal gaaban u dirtay Tifaftiraha wargeeska The New York Times iyadoo ka codsatay musharaxa magacaaban ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump inuu joojiyo ka hadlida dhimashada wiilkeeda.
“Waan hubaa in Chris uu jeclaan laheen magiciisa ama xasuustiisa loo isticmaalo noocaas,” ayay Mary Commanday warqaddeeda ku qortay, oo la daabacay Sabtidii.
” Waxaan rajeynayaa in ay joojin doonaan si degdeg ah isticmaalka sida siyaasada ah ay ololaha ugu adeegsanayaan ayay tiri .”
Weerarkii Benghazi ayaa marar badan lagu xusay khudbadahii Jamhuuriga ee ka dhacayay magaalada Cleveland, halkaas oo loo isticmaalayay sababta musharaxa la magacaabay ee Democratic Hillary Clinton aysan u qalmin jagada madaxtanimada .
Clinton ayaa xiligaas weerarrada Bengazi aheed xoghayaha arimaha dibada. iyadoo qaar ka mid ah konserfatifka ay ku eedeenayaan Clinton iyo maamulka Obama in ay ku fashilmeen ammaanka weeraradi Benghazi kuna eedeeyeen dhimashada Stevens iyo saddex kale oo Maraykan ah
Dumarka: Qasaaro halis ah ayaad ka helaysaa hadii Ninkaaga aad arintaas u sheegtid -Talo Culus